GNOME 40.5 inovandudza yakazara skrini zoom rendering | Linux Addicts
Mushure memwedzi miviri nehafu mushure mekupedzisira yapfuura dhirivahari, Isu tatove neiyo nyowani yekuvandudza poindi yevhezheni yeimwe inonyanya kushandiswa desktops muLinux. Ndezve GNOME 40.5 (yazvino iGNOME 41), yechishanu yekugadzirisa yedhisheni yedesktop yakachinja zvinhu zvakanyanya. Uye ndezvekuti, mukuwedzera kune mamwe magadzirirwo akadai sekuita, mushanduro yakabudirira v3.38 ma gestures akakurumbira akaunzwa pane yekubata bata.
Kunyangwe zvipembenene zvakagadziriswa, iyo runyora rwemashoko GNOME 40.5 haina kunyanya kuwanda, chimwe chinhu chinonzwisisika kana tikafunga kuti pakatove nemabudiro mana ekubvisa tsikidzi. Pakutanga, GNOME 40.5 inofanira kunge yakasvika munaGunyana 22, asi chimwe chinhu chakanonotsa kuburitswa uku. Iyo inotevera vhezheni, GNOME 40.6, ichanonoka zvakare.
Pfungwa dzeGNOME 40.5
Yakavandudzwa maratidziro eiyo yakazara skrini zoom.
Yakagadziriswa skrini inoongorora uye tsigiro yeX11 yepakati tinya emulation muMutter.
Tsigiro yekutarisisa mativi maviri eCanon DR-C240 mune Nyore Scan.
Yakavandudzwa GNOME Shell kugadzirisa mapikicha anopenya kana glitches akaonekwa pakubva paChiitiko maonero.
Nzvimbo isiriyo yedock spacer yakagadziriswa.
Yakagadzirisa nyaya neiyo chaiyo kiibhodhi isiri kunyoresa mabhatani akatsikirirwa muX11.
Totem 3.38.2, iyo zvino inotsigira MPL subtitles.
Zvimwe zvidiki zvigadziriso uye zvigadziriso zvezvese, kusanganisira maapplication.
GNOME 40.5 yakaburitswa maawa mashoma apfuura, zvinoreva kuti kodhi yako yave kuwanikwa. Zvimwe zvezvishandiso zvichave zviripo munguva pfupi iri kutevera paFlathub, nepo kuShell zvinokurudzirwa kumirira kugoverwa kwedu kweLinux kuwedzera mapakeji matsva kumatura epamutemo. Kune masisitimu anoshanda seUbuntu, mamwe mapakeji anogona kusavandudzwa kusvika Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40.5 yasvika ichivandudza kupihwa kweiyo yakazara skrini zoom, pakati pezvimwe zvitsva